.:: IT WEB CRAZY BOY ::.: COLOR DETECTOR
Web Design သမားတွေနဲ့ CSS Code တွေရေးနေတဲ့သူတွေအတွက် အသုံးဝင်မယ့် color detector လေးတင်ပေးလိုက်ပါတယ်။
အသုံးဝင်ပုံကတော့ မိမိလိုချင်တဲ့အရောင်ပေါ်ကို mouse နဲ့ထောက်လိုက်ရင်သူကCodeအဖြစ်ဖော်ပြပေးပါတယ်။
(Point mouse cursor anywhere on the screen)
copy ကူးပြီး ယူလို့တော့မရပါဘူး။နံပါတ်တွေကိုစိတ်နဲ့မှတ်ပြီး Code အဖြစ်ပြန်ရေးမယ်ဆိုရင်
ရှေ့က # ဆိုတာလေးထည့်ပေးဖို့လိုပါတယ်။ CSS တွေရေးနေတဲ့သူငယ်ချင်းတွေတော့သိမှာပါ။
စမ်းသုံးကြည့်ချင်တယ်ဆိုရင် အောက်ကလင့်မှာ ယူလိုက်ပါ။
Download >> Color Detector
Posted by FlashSongCrazy at 10:44